Wasiirka Maaliyadda Dalka Brazil Oo Sheegay In Dhaqaalaha Dalkaas Uu Soo Kabsanayo
Wasiirka Maaliyadda ee dalka Brazil Mr. Henrique Meirelles ayaa talaadadii sheegay in dhaqaale-xumadii dalka Brazil hareysay labadii sano ee ugu dambeysay ay hadda dhamaatay. Waxa uuna sheegay in dhaqaalaha dalka uu soo kabsanayo.
“Brazil maanta waa ay kobceysaa. Tani waa arrin muhiim ah, sababtoo ah waxaa dalka soo wajahay sanado adag. Balse arrinta muhiimka ah ayaa ah in dhaqaalaha dalka uu soo wanaagsanaanayo” ayuu yiri wasiirka.
Si kastaba ha ahaatee dhaqaalaha dalka Brazil ayaa sanadahii lasoo dhaafay ahaa mid aad u liitay, waxaana dalkaas uu ku dhawaaday in uu lumiyo booska koobaad ee uu kaga jiro dhaqaalaha dalalka Koofur Ameerika.
Sida ay qorayeen saxaafadda dalkaas, waxaa jira shaqo la’aan baahsan oo soo wajaheysa dhallinyarta dalkaas. Waxaana sanadahii lasoo dhaafay dowladda ay ku dadaaleysay sidii ay u yareyn laheyd ganacsiga daroogada oo Brazil ka dhigeysa mid kamid ah wadamada ugu badan dunida ee falalka ganacsiga daroogada uu ka dhaco.
Wasiirka Maaliyadda ayaa hadalkiisa ku soo gabo-gabeeyay in uu aaminsanyahay in sida hadda Brazil ay ku socoto ay tahay sidii loo baahnaa. Waxa uuna bogaadiyay sida ganacsatada ay ugu qeyb-qaadaneyso kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleysiintaba.